Kuphelile ngo ‘Zahara’ emakhumbini | News24
Kuphelile ngo ‘Zahara’ emakhumbini
OSOMATEKISI nenhlangano yamatekisi i-South African National Taxi Council (Santaco) bathi bazimisele ngokulwisana nokulayishwa ngokweqile kwabagibeli ikakhulukazi labo abashayela izimoto zohlobo lwe-Quantum.
Lezi zimoto ezilayisha umphakathi bezihlalisa abantu esikhaleni senjini esiseduze kwamshayeli nebesesiqanjwe ngokuthi ‘uZahara’.
Amalungu ale nhlangano aseqale uhlelo lokuma emgwaqeni begade amatekisi alayisha ngokweqile.
Bathe inhloso yabo ukwenza isiqiniseko sokuthi akekho umgibeli okubekwa impilo yakhe engcupheni ngoba ngeke aze akhokhelwe imali yesinxephezelo uma itekisi abehamba ngalo libandakanyeka engozini.
UMnuz Bheki Sokhela okhulumela i-Santaco eMgungundlovu uthe bafuna ukuwuqeda nya lo mkhuba owenziwa abashayeli bamatekisi wokulayisha ngokweqile.
“Lento siyenza ngoba siyawuthanda futhi siwukhathalele umphakathi wethu. Sinethimba eligada ezindaweni ezehlekene nami ngiyingxenye yalo. Sekunamasonto amane siwuqalile lo mkhankaso kanti inhloso yethu ukuwubona uqhubeka uya phambili.
“Asibhekelele nje kuphela ukulayisha ngokweqile kodwa sigada nalamakhumbi ahamba eceleni komgwaqo lapho kungafanele ahambe khona ngoba ejahe ukufika lapho eya khona. Lento abayenzayo idala isiminyaminya esikhulu futhi ihlukumeza abantu abahamba ngezimoto ezincane ngoba uma sekuphele indawo yokuhamba bafuna ukungena phambi kwezimoto ezincane,” kubeka yena.
Uqhube wathi bayazi ukuthi amaphoyisa omgwaqo ayazama ngokusemandleni ukuqeda le nkinga kodwa babone kungcono ukuba balekelele nabo ngoba lamathikithi atholakalayo abiza imali enkulu.
“Umphakathi nawo siyawucela ukuba ubambisane nathi ngoba kwesinye isikhathi akusibo abashayeli abalayisha ngokweqile kodwa ibona abagibeli abazicelelayo bakhale ngokuthi sebeshiywe isikhathi sokuya emsebenzini. Uma uzazi ukuthi uya emsebenzini vuka kusanesikhathi ukuze ungeke ufake impilo yakho engcupheni ngokuhlala kulento abayibiza ngo’Zahara’.
Abagibeli bamatekisi nabo bazwakalise imizwa yabo ngokuqedwa kokulayisha ngokweqile emakhumbini.
UMnuz Bonginkosi Mthethwa ohlala KwaPata uthe yena ujabule kakhulu ngalesi sinqumo wathi sizosindisa izimpilo zabantu abaningi.
“Siyawubona umehluko selokhu kuqale lolu hlelo ngisho isiminyaminya sesehlile ekuseni nantambama ikakhulukazi uma usubheke ngase-crossini laseMbali. Lento abayenzayo bakhombisa ukuthi basikhathalele njengabagibeli. Ibisidina ngempela lento ngoba ikhumbi ibike ihlale ingaphumi erenke ngoba kushoda umuntu oyedwa ozohlala emjondolo [Zahara],” kubeka yena.
Uqhube wathi inkinga esele eyokuthi abashayeli bamatekisi badlule namalungu omphakathi emagalaji ntambama.
UMnuz Sihle Ngcobo ohlala eMbali Unit 3 uthe yena wake wahlala kulendawo ebizwa ngo-’Zahara’.
“Sijabule kakhulu ngoba nathi sizokwazi ukuhlala kahle sikhululeke. Okokuqala nje ukuthi uma usuhleli kulo ‘ Zahara’ ubuphinde ukhokhe nemali egcwele ekubeni bazi kahle ukuthi babeke impilo yakho engcupheni. Sengathi lento abayiqalile osomatekisi ingangayekwa kodwa iqhubeke njalo.”